DHEGEYSO: Shacabka muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay lacagaha cusub ee lasoo daabacayo | Hadalsame Media
Home Wararka DHEGEYSO: Shacabka muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay lacagaha cusub ee...
DHEGEYSO: Shacabka muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay lacagaha cusub ee lasoo daabacayo
(Muqdisho) 09 Luulyo 2018 – Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga aragti dhiibtey calagta cusub ee dowladda Federaalka Soomaaliya ay soo daabici doonto dhowaan.
Qaar ka mid ah Shacabka oo la hadlay Hadalsame News ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan lacagta cusub iyaga oo tilmaamay in ay tahay arrintan mid wangaasan maadaama lacagtii hore ay noqotay mid duugowday.
Shacabka waxaa ay sheegeen in lacagta cusub ay ka qeyb qaadaneyso kobcinta dhaqaalaha dalka balse waxaa ay tilaameen in la helo Bankgii dhexe si loo maareeyo lacagta.
Dhowaan ayey aheyd markii wasiirka wasaaradda Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu sheegay in ay soo daabici doonto wasaaradda lacago cusub oo Shilin Soomaali ah.
Previous articleDHEGEYSO: Wasiir katirsan wasiirada Soomaaliya oo xilka laga qaaday
Next articleAskar katirsan dowladda soomaaliya oo lagu dilay magalada muqdisho